Okwu mmalite na Statistics nwere R
Nke a N'ezie akụzi statistics iji software efu R.
Ojiji mgbakọ na mwepụ dị ntakịrị. Ebumnobi ya bụ ịmata ka esi enyocha data, ịghọta ihe ị na-eme, na inwe ike ịkọwapụta nsonaazụ gị.
Ihe nkuzi a bụ maka ụmụ akwụkwọ na ndị na-eme usoro mmụta niile na-achọ ọzụzụ aka. Ọ ga-aba uru maka onye ọ bụla kwesịrị inyocha ezigbo dataset dị ka akụkụ nke nkuzi, ọkachamara ma ọ bụ ọrụ nyocha, ma ọ bụ naanị n'ihi ọchịchọ ịmata ihe nyocha dataset n'onwe ha (webụ data, data ọha, wdg).
Usoro a dabere na software efu R nke bụ otu n'ime ngwa ngụkọ ọnụ ọgụgụ kacha ike dị ugbu a.
Ụzọ ndị a kpuchiri ekpuchi bụ: usoro nkọwa, ule, nyocha nke iche iche, usoro nkwụghachi azụ linear na logistic, data nyocha (nlanahụ).
Okwu mmalite na Statistics nwere R January 17th, 2022Tranquillus
GỤỌ Ihe ndabere nke ọrụ ndị ahịa
gara agaJiri CCI nke ọma na ozi-e
-esonụEnyere ndị nne na nna nwere ụmụaka nwere ụfọdụ ọrịa na-adịghị ala ala ma ọ bụ ọrịa kansa
Ndụmọdụ dị mkpa Excel dị mkpa
Ntọala nke njikwa ọrụ: Ndị na-eme ihe nkiri
Inweta ekwentị na-aga nke ọma